‘नेता’लाई कसले पाल्ने ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
२७ वैशाख २०७५ १५ मिनेट पाठ
सानोमा बिहानै ६ बजे घरबाट स्कूल निस्कँदा मेरो घर अगाडिको चोकमा पार्टीका स्थानीय नेताहरू बसेर पत्रिका पढ्दै मेरो नेताले यो गरे अनि तेरो नेताले त्यो गरे भनेर गफ गरिरहेको देख्थेँ । स्कूलबाट बेलुका गोधुली साँझमा घर फर्कंदा पनि त्यहीँ नेताहरू चिया तान्दै क्यारमबोर्डको गट्टी एउटा आँखाले ताक्दै गर्दा पनि आफ्नै नेताको दाह्री र जुँगाको गफ गर्दै बसेको देख्थेँ । बिहानदेखि बेलुकासम्म उहाँहरूको दिन त्यसरी नै बित्थ्यो । म ठूलो हुँदै गएँ, स्कूल सकेर कलेज पढ्ने भएँ, आफ्नो काम गर्न थालेँ तर आज पनि यो दृश्य बदलिएको छैन । आज फर्केर हेर्दा मलाई यो दृश्य भयानक लागेको छ ।
मेरो टोलका मात्र होइन प्रतिनिधिसभामा जितेका नेताहरूको पनि कुनै पेसा रहेनछ ।हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष जितेका सांसदहरूमध्ये ६४ प्रतिशतले आफ्नो पेसा नै राजनीति रहेको विवरण बुझाएका छन् । अरू धेरैले पनि कृषि, व्यवसाय भनेर पारिवारिक पेसालाई उतारेका मात्र छन् । तर अधिकांशको आफ्नो पेसा छैन । नेपाली राजनीतिमा एउटा आधारभूत प्रश्न नै सधैँ अनुत्तरित रह्यो, ‘नेताको गुजारा कसरी चल्छ?’
विकसित देशहरूमा आफ्नै पेसा भएका सक्षम व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउने गरेका छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति बराक ओबामा वकिल थिए । उनले आफ्नो गुजारा पढाएर अनि लेखकको रूपमा चलाउँदै थिए । डोनाल्ड ट्रम्प राजनीतिमा व्यापार–व्यवसायबाट आएका हुन् । वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ भवन निर्माणका विशेषज्ञ हुन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन् । फ्रान्सका कान्छा राष्ट्रपति म्याक्रोन आर्थिक लगानीकर्ताका रूपमा बैंकको जागिरे थिए । बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरेसा मे पनि बैंकर अनि आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दैगर्दा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । अन्य धेरै देशहरूमा राजनीतिमा पनि आफ्नो पेसा भएकै सक्षम मानिस आउने गरेका छन् ।
पेसा कि सेवा ?
हाम्रो देशमा राजनीतिलाई पेसाका रूपमा लिइएको छ । झन् आज भोलि त राजनीति आफ्नो परिवार अनि आफन्तलाई नै जागिर खुवाउने सिँढी बन्दै छ । फलस्वरूप, हाम्रा नेताहरू केही सीमित कार्यकर्ताहरूको प्रभाव अनि केही ‘डोनर’हरूको दबाबमा काम गर्दै छन् । तर यदि सक्षम मानिस पदमा पुग्थे भने उनीहरू परिणाम निकाल्न तत्पर हुन्थे, कसैको दबाबमा काम गर्नुपर्दैनथ्यो ।
आफ्नो पेसाबाट आएका नेताहरू राजनीतिमा योगदान सकेपछि राजनीतिबाट सन्यास लिन्छन् वा अभिभावकका रूपमा बस्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आफ्नो कार्यकालपछि प्रत्यक्ष राजनीतिमा लाग्नेभन्दा पनि विभिन्न सामाजिक अनि राजनैतिक अभियानहरूमा सक्रिय छन् । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र उरुग्वेका पूर्वराष्ट्रपति होसे मुहिका पदमा रहँदासमेत आफ्नो साधारण घरमा बसे, महँगा गाडी र सुरक्षाकर्मीको घेरा कहिल्यै लिएनन् । उनले आफ्नो तलबको ९० प्रतिशत रकम विभिन्न सामाजिक संस्थालाई दिए । उनले साधारण जीवन नै बिताए । पूर्वविद्रोही मुहिकाले १३ वर्ष त जेल जीवन बिताए । तर उनले त्यागको हिसाब किताब कहिल्यै गरेनन् । त्यस्तै, भारतका ११ औँ राष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलामको निधन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई लेक्चर दिँदै गर्दा भयो ।
नेपाली राजनीतिमा कुनै पूर्वप्रधानमन्त्री अनि मुख्य नेताले राजनीतिबाट अवकास लिएको उदाहरण छैन । बरू बेलाबेलामा हाम्रा पूर्वमन्त्री, प्रधानमन्त्री अनि राष्ट्रपतिले आफ्नो सुविधा नपुगेको गुनासो गर्छन् । थप गाडी अनि घर माग्छन् । नगर–गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू पहिलो बैठकमै आफ्ना लागि मोबाइल किन्छन् अनि मेयरहरू आफ्ना लागि गाडी थप्छन् । हामीले राजनीतिमा सेवाको भाव नै बसाउन सकेनौँ ।
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा म काठमाडौँ—९ बाट उठ्दै गर्दा एकजना मतदाताको अपेक्षा सम्झन्छु, ‘मिलनजी, तपाईंले जित्नुभयो भने कहिलेकाहीँ मापसेमा परेँ भने छुटाइ दिनुपर्छ है ।’ हामीले नेतासँग गर्ने अपेक्षा यस्तै छ । देश वा समाजको होइन कि मेरो काम गरिदिने मानिस ‘नेता’ हो । अनि यही सामाजको त्यही अपेक्षा पूरा गरेर हाम्रा नेता जिन्दगीभर नेतृत्व गर्दै छन् । एकचोटि मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि पटकपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मेयर, अध्यक्ष बन्न मरिहत्ते गर्दैछन् । हाम्रोमा त्याग गर्ने अनि त्यही त्यागको हिसाब किताबले राजनीति गर्ने परम्परा नै बनेको छ ।
अहिले सहरको वरिपरिका ठाउँहरूमा हाल नेताहरू जग्गा प्लाटिङ, दलाली गरेर आफ्नो दिन काट्दै छन् । उनीहरू उद्यमशील अनि उत्पादनशील हुन सकेका छैनन् । अहिले गाउँमा अनि दुर्गममा चाहिँ कार्यकर्ता अनि स्थानीय नेताहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत काम गरेर राजनीति गर्दैछन् । केही नेताहरू चाहिँ वडा अनि स्थानीय तहमा आएको बजेटमा कमिसन अनि ठेक्कापट्टा गरेर राजनीति गर्दै छन् । पदमा पुगेपछि पनि सरकारी धन आफ्ना कार्यकर्तालाई जनताको नाममा बाँड्दै छन् । माथिका नेताले तलका नेतालाई हेर्ने अनि तलका नेताले माथिका नेतालाई पदमा पु¥याउने । तसर्थ, तलका अनि माथिका नेता दुवैले राजनीति छाड्न सक्दैनन् । फलस्वरूप, राजनीति सेवा नभई पेसा बन्दै छ ।
अब कस्तो नेता ?
पहिलो कुरा त, सामाजिक बुझाइमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ । राजनीतिलाई पेसा होइन कि सेवाका रूपमा स्थापित गरिन जरुरी छ । जिन्दगीमा केही गर्न नसक्नेले राजनीति गर्ने होइन । अब राजनीतिमा कस्तो मानिस आउने भन्ने कुरामा व्यापक रूपमा पँधेरी, चौतारी अनि चियापसलहरूमै छलफल हुन जरुरी छ । केही पेसा नै नभएको मानिस राजनीतिमा आएर पनि उसले योगदान गर्न सक्दैन । त्यागको भरमा मात्र गरिने राजनीतिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।
दोस्रो, पार्टीगत अनि नीतिगत सुधार आवश्यक छ । अब पार्टीले सक्षम मानिसले स्थान पाउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यदि यसो गर्न सके नेताले आफूलाई सक्षम बनाउन लाग्ने थिए । राजनीतिमा मात्रै आश्रित हुनुपर्दैन थियो । अब उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा पनि माथिल्लो नेताले छान्नेभन्दा पनि योग्यता अनि क्षमताको आधारमा चुनिने पद्धति अपनाउन जरुरी छ । साथै, अब पार्टीले नीति अनि कार्यक्रम नै बनाएर आफ्ना सदस्यलाई उद्यमशील अनि उत्पादनशील बनाउन नेतृत्व गर्न जरुरी छ । साथै, स्वार्थ नबाझिने गरी पार्टीले नै आफ्ना उद्यमशील सदस्यहरूलाई सहयोग गर्न ‘उद्यमशील सहायता कक्ष’ नै सञ्चालनमा ल्याएर उद्यमशीलतालाई पार्टीको अभिन्न अंग बनाउन जरुरी छ ।
तेस्रो, अब राजनीतिलाई योगदानका निम्ति ‘प्लेटफार्म’का रूपमा विकास गरिन जरुरी छ । नेताले आफ्नो कार्यकालपछि सत्तामै टाँसिइरहने होइन कि अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, नयाँ पुस्तालाई सिकाउने, पत्रपत्रिकामा लेख्ने, किताब लेख्ने, नेतृत्व विकास गराउने काम गरेर पनि समाजलाई ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छन् । आफ्नो गुजारा चलाउन सक्छन् । राजनीतिमा सजिलै जोडिन सक्ने अनि राजनीतिबाट सजिलै छुटिन सक्ने संस्कार बनाउन नसकेसम्म राजनीति पेसा नै बनिरहनेछ । उदाहरणका लागि, हाम्रा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आफ्नो कार्यकालपछि आफ्नो डाक्टरी पेसामै फर्किन केले रोकेको छ ?
नेताका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पारिवारिक साथ हो । परिवार नै त्यागेर गरिने राजनीति धेरै हदसम्म सफल हुँदैन । तसर्थ, परिवारका अन्य सदस्यहरूको सहयोगमा राजनीतिमा योगदान गर्न सकिन्छ । यसका लागि पारिवारिक सहमति चाहिन्छ । जस्तै, श्रीमान् राजनीतिमा आउने हो भने श्रीमतीले परिवार धान्न सक्नुपर्छ । अनि श्रीमती राजनीतिमा आउने हो भने श्रीमान्ले परिवारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
नेता नै समस्या
एउटा सत्य घटनासँगै आफ्नो कुरा सक्न चाहन्छु । १८ औँ शताब्दीमा युरोपमा एउटा रोगको महामारी फैलियो जसमा बच्चा जन्माएपछि आमाको ४८ घन्टाभित्र मृत्यु हुने गथ्र्याे । यो रोग डरलाग्दो तरिकाबाट फैलँदै थियो । त्यो जमानामा अहिलेको जस्तो प्रविधि हुने कुरै भएन । के गर्ने कसो गर्ने कसैलाई थाहा थिएन । डाक्टरहरू बिहान ‘पोस्टमार्टम’ गरेर रोग पत्ता लगाउन खोज्थे अनि दिउँसो बच्चा जन्माउन अनि राउन्डमा जान्थे । रोग फैलँदै गयो । केही वर्षपछि चिकित्सक ओलिभर वेन्डेल होल्म्सले भने, ‘साथीहरू हामीमै केही समस्या छ । यो रोगको कारण नै डाक्टरहरू हुन् ।’ उनले बिहान पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टरहरूले दिउँसो बच्चा जन्माउन जाँदा हात नधोएकाले आमाहरूको मृत्यु भएको कुरा भने । तर कसैले उनको कुरा सुनेनन् । ३० वर्षपछि यो कुरा साबित भयो । उनीहरूले आफ्नो हात धुने अनि औजारलाई निर्मलीकरणा गर्दा यो रोग बिस्तारै हराउँदै गयो ।
कहिलेकाहीँ समस्या हामीमै हुन्छ अनि समस्याको कारक हामी आफैँ हुन्छौँ । हो, आजको राजनीतिको समस्या हाम्रा ‘पूर्णकालीन नेता’ हुन्, जसले जीवनभर राजनीति गरे अरू केही गरेनन् । तसर्थ, अब हामीले यो रोगबाट छुटकारा पाउने हो भने अब ‘नेतालाई कसले पाल्ने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ । जबसम्म नेतालाई राजनीतिले पाल्छ, तबसम्म राजनीति सुसंस्कृत बन्न सक्दैन अनि देश समृद्ध बन्न सक्दैन ।
(केन्द्रिय सदस्य, विवेकशील साझा पार्टी )
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७५ ०९:०९ बिहीबार
नेतालाई कसले पाल्ने